- विद्यालय अगाडि नै २ फिटको हिलो, कहाँ छ सरकार ?
विद्यालय अगाडि नै २ फिटको हिलो, कहाँ छ सरकार ?
काठमाडौं: कुलेश्वर फलफूल गोदाम र माध्यमिक बिधालयको अगाडीको सडक अहिले हिलोका कारण अस्तव्यस्त बनेको छ ।
यसरी हिलो जमेर बसेको हालसालै भने होइन । बिगत २ महीना अगाडीदेखि पानी पर्न थालेसँगै यहाँ हिलो जम्न सुरु गरेको हो ।
करीब २५ मीटर चौडाई र एक सय मिटरको लम्बाइमा हिलो जमेर बसेको छ । फलफूल बजारसँगै कुलेश्वर माध्यमिक बिधालय छ । बिधालयको गेट अगाडी नै हिलो जमेको छ । दैनिक सयौं बिधार्थी यहीँ हिलोसीत जोगिंदै बल्ल-बल्ल बिद्यालय पुग्ने गर्छन् । यसका साथै फलफूल गोदाममा आउनेहरुको संख्या हजारौं छ । उनीहरु सबै यहीं बाट नै आवात-जावत गर्छन् ।
हिलो जमेको ठाउँको छेउँमा ढुङ्गा तथा ईटा हालेर खुट्टा टेक्ने ठाउँ मात्र बनाइएको छ ।
। ‘यिनै ढुङ्गामा बल्ल बल्ल खूट्टा अडाएर हिड्नु पर्छ, भारी सँगै ज्यान थाम्न मुस्किल हुन्छ’ एकजना भरियाले भने । कयौं पटक आफु फलफूल बोकेको भारी सँगै हिलोमा परेको पनि उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै स्कुल जाने बिधार्थीहरुका लागि पनि यो बाटो निकै मुस्किल छ । हिलो अलि-अलि ओभाएको बेला त जसोतसो जोगिएर जान सक्छन् तर पानी परिरहेको बेला त्यहाँ हिड्नसक्ने अवस्था नै छैन । बिहान घरबाट स्कुलको पोसाक सहित आउने उनीहरुमध्दे धेरै जना पोशाक सहित हिलोमा पर्नेगरेको व्यापारिहरु बताउँछन् ।
यहाँ बिशेष गरी बर्षा याममा यस्तो समस्या हुने गरेको छ । आकाशबाट परेको पानीले निकास नपाएपछि यहाँ बर्सेनि हिलो जम्ने गर्छ यो पटक भने अल्ली धेरै नै हिलो जमेर करीब २ फिटको उचाईमा पुगेको छ । सम्बन्धित निकाएको बेवास्ताका कारण यस्तो हुन गएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको ढल तथा सडक मर्मतकालागि सरकारी तथा गैरसरकारी गरी दर्जनौं संस्थाहरुले कामगर्दै आएछन् । तर उनीहरु यो बिषयमा भने अनबिज्ञ नै रहेको देखीएको छ । यसरी दैनिक हजारौं सर्वासधारणलाई प्रभाब पारिरहेको ठाउँमा उनिहरुको ध्यान नजानुले आफ्नो प्रचार बाजीका लागि मात्र काम गर्ने प्रबृति हो भनेर प्रस्ट संग भन्न सकिन्छ ।